सञ्जीवको ब्लग: फोटो ब्लग: धानका खेत र अस्ताउँदो घाम
म राष्ट्रवादी होइन । राज्यका सीमानाप्रति उत्पात विश्वास लाग्दैन । राष्ट्रवाद, धर्म, जातीयतावाद आदि सबै मानिसका कमजोरी हुन् । तर पनि आफू बानी परेको माटोको सुवास अमूल्य हुने रहेछ । यो सुवास सम्झँदा अन्त गएर बस्न सकुँला जस्तो लाग्दैन ।
साँझमा हिड्न सुरु गर्दासम्म भारतले नेपालका सीमाना बन्द गरेर सामान ल्याउन दिएको थिएन । आउँदा नाका खूलेको समाचार आएछ ।
सामाजिक सञ्जालमा सीमा बन्द भएको कुरामा खासै धेरै टिप्पणी गरिन । नाका खूल्दा पनि यसका विषयमा कुरा गर्ने मन छैन । यो विषय गफ गर्न लायक पनि छैन ।
राम्रा फोटा खिच्ने सिप छैन । अरूले खिचेका राम्रा फोटा हेर्दा कहिलेकाहिँ सास रोकिन्छ । त्यसैले नजाने पनि फोटा खिच्ने रहर लाग्छ । आजको हिँडाइमा पनि हाते फोनबाट केही फोटा खिचेँ । काठमाडौँका ओरिपरीका गाउँ कस्ता देखिन्छन् ? भन्ने झलक फोटाबाट पाइन्छ कि ?!
बाटोमा मैले सुन्दर धानका खेतसँग भलाकुसारी गरिरहेको अस्ताउँदो घाम देखेँ । करेसाबारीमा निस्फिक्री काम गरिरहेका मानिस देखेँ । रमाएर बाटोमा खेलीरहेका बालबालिका देखेँ । फोटामा पनि तिनै कुरा छन् ।
क्याप्सन केलाई चाहियो ?!
Posted by Sanjeev at 7:25 PM